I-Aviary~golfers iphupha ~intliziyo yendawo eselunxwemeni - I-Airbnb
I-Aviary~golfers iphupha ~intliziyo yendawo eselunxwemeni
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDella
Ibekwe phakathi kwentlaka, iavokhado kunye nemithi yemango 'I-Aviary' yindawo yabucala, ezolileyo kunye nezolileyo yokuphumla kunye nokukhululeka.
IAviary ngaphezulu ijonge ibala legalufa labucala eli-9 (elifutshane) liyenza igqibelele kubadlali begalufa.
I-Didillibah ibekwe kwindawo esembindini kuNxweme lweSunshine ilungele ukuphononongwa.
Kukuhamba nje kwe-10min ukuya kwiilwandle ezintle, okanye iivenkile kunye neeresityu zaseMaroochydore.
Ukuqhuba ngemizuzu eli-15 kwaye unokuba phezulu kwindawo ephefumlayo.
Kananjalo sinoluhlu lwesi-2-iNest.
NCEDA UFUNDE ngokupheleleyo phambi kokuba ubhukishe.
IAviary ikude nendlu enkulu kwaye inendawo yayo yokungena kunye neyokupaka.
Beka ngaphezulu kwenqanaba elinye IAviary inegumbi lokulala elahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi elikhulu linendawo yokuhlala ebanzi kunye nekhitshi elungiselelwe kakuhle.
Ngaphandle kukho idesika encinci yabucala enebar yesidlo sakusasa, ilungele ukubukela ukusa okanye ukutshona kwelanga.
Umphezulu wokupheka ngegesi/ifriji yebha
I-Microwave / umenzi we-toasty
Isipheki serayisi sombane
Ilaphu lesitya/ulwelo lokuvasa
Ikhitshi / iitawuli zeti
*AKUKHO matshini wokuhlamba izitya
I-49inch smart TV inc Netflix
IiDVD kunye nomdlali
Ukubuyisela umva umjikelo womoya womoya kunye nefeni enkulu yesilingi.
QAPHELA: Ishawa kuphela *AKUKHO bhafu
I-shampoo / i-conditioner
Isepha ngesandla/iphepha langasese
Ibhedi yokumkanikazi/ilinen yebhedi emhlophe
iitafile/izibane ezisecaleni kwebhedi
isifuba sedrowa / iwardrobe
Kunye ne-reverse cycle air conditioning.
QAPHELA: Akukho gadi/ indawo enengca enokusetyenziswa kule ndawo.
Nangona kunjalo kukho idesika enebar yesidlo sakusasa, izitulo kunye nezitulo.
Kwakhona, wamkelekile kakhulu ukuba uhambe / uhambe kwibala legalufa.
4.97 · Izimvo eziyi-396
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi396
IDidillibah yindawo entle kwaye ezolileyo. Uya kuziva ngathi usembindini welizwe kwaye usembindini wokuhlola lonke unxweme kunye ne-hinterland.
Woombye -5 imizuzu drive, kunye Spar, iibhula, yokubhaka, ofisi yeposi, ibhanki, ikhemisti, newsagents, laundrette, pub kunye nokhetho iivenkile zekofu.
Maroochydore -15 imizuzu yokuqhuba, apho uya kufumana indawo enkulu yokuthenga, iibhari, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zekofu.
Umthi womqhaphu -15 imizuzu yokuqhuba inendawo entle yepaki kwaye kulapho umlambo udibana khona nolwandle. Inoluhlu lweevenkile ezizimeleyo kunye nekofu enkulu.
Iimarike ze-Eumundi -imizuzu engama-20 yokuqhuba 'kufuneka uye' kwiindwendwe.
I-Coolum -20 imizuzu yokuqhuba. Kwezo ndwendwe zidlamkileyo ndingacebisa kakhulu ukuba zinyuke intaba.Xa unyukile ungangena kwiCoolum kwaye uthabathe ikofu okanye isiselo esipholileyo kwaye uzulazule ecaleni kwendlela okanye ungene elunxwemeni.
Palmwoods -10 imizuzu drive
Ikhaya leRicks Garage. I-pub enemixholo emnandi ebonelela ngeebhega ezimnandi kunye neembambo ezinejusi. Umculo ophilayo kunye negadi yebhiya entle.
Montville- imizuzu engama-20 ukuqhuba.
Idolophu encinci entle kangaka yehinterland eneevenkile ezininzi, iiresityu kunye neevenkile zekofu.
Siyazixabisa iindwendwe zethu zithanda ukuphumla ngoxolo noxolo; nangona kunjalo sihlala sizama ukuvela phantsi ukuze sithi 'hi' ngaxeshanye. Ukuba unombuzo okanye ukuba singakunceda nangayiphi na indlela, nceda uzive ukhululekile ukubuza.